ओली–प्रचण्डबीच फेरी भनाभन, यस्ताे छ कारण — sancharkendra.com
काठमाडौँ । ‘राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाउन खोजिएको’ भन्ने विषयमा नेकपाका दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालबीच भनाभन भएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आइतबार दिउँसो भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष ओली र अर्का अध्यक्ष दाहालबीच महाअभियोगकै विषयमा आरोप–प्रत्यारोप भएको हो ।
शनिबार साँझ मन्त्री र राज्यमन्त्रीलाई बालुवाटारमा बोलाएर प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई दुवै पदबाट हटाउने र राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाउने तयारी भएको भन्दै यसका विरुद्ध लड्ने रणनीति सार्वजनिक गरेका थिए । त्यसको अर्को दिन भेटमा ओली र दाहालबीच सवालजवाफ भएको हो । दाहाल र ओलीबीच भएको संवादबारे दुवै समूहले आ–आफ्ना निकट नेताहरुलाई बताएका छन् ।
छलफलको सुरुमै प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाउने गरी कानून व्यावससायीसँग किन छलफल गरेको भन्दै असन्तुष्टि पोखेका थिए । जवाफमा दाहालले ‘गलत कुरा नगर्नुस्, महाअभियोगबारे कहीं कतै छलफल भएको भए प्रमाण दिनुस्’ भनेको नेकपाको उच्चस्रोतले बतायो । त्यसपछि ओलीले ‘मलाई थाहा छ, तपाईंहरु के गर्दै हुनुहुन्छ’ भन्ने जवाफ फर्काएको स्रोतले बतायो । बालुवाटारमै मन्त्रीहरु बोलाएर गलत सूचना प्रभाह गरेको भन्दै दाहालले पनि असन्तुष्टि पोखेका थिए ।
दाहालसँगको भेटमा ओलीले शनिबार खुमलटारमा सचिवालयका ६ सदस्य बसेर सरकारविरुद्ध षडयन्त्र गरेको आरोप लगाएका थिए । जवाफमा दाहालले प्रधानमन्त्री नै पार्टी फुटाउन लागेपछि सल्लाह गर्न बसेको जवाफ दिएको स्रोतले जानकारी दियो ।
शनिबार दाहाल निवासमा दाहालसहित वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम, नारायणकाजी श्रेष्ठ र रामहादुर थापाबीच छलफल भएको थियो । यसैलाई लिएर प्रधानमन्त्री ओलीको असन्तुष्टि थियो । खुमलटारमा केही कानून व्यवसायीसँग दाहाल–नेपाल समूहका नेताहरुको छलफललाई लिएर ओलीले प्रश्न उठाएका थिए । स्रोतका अनुसार जवाफमा दाहालले ‘तपाईंले पार्टी विभाजन गर्नुभयो भने के गर्ने भनेर छलफल गरेको हो’ भन्ने जवाफ दिएका थिए । बालुवाटारबाटै प्रधानमन्त्री आफैंले राष्ट्रपतिविरुद्ध महाअभियोग लगाउने तयारी भएको बताएकोमा अध्यक्ष दाहालको असन्तुष्टि थियो ।
ओलीसँग भेट गर्नुअगाडि दाहाल पार्टीका दुई वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाललाई लिएर प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिबारे छलफल गर्न राष्ट्रपतिकहाँ पुगेका थिए । राष्ट्रपतिलाई महाअभियोगको हल्ला सत्य नभएको भन्दै विश्वस्त हुन आग्रह गरिएको नेता खनालले बताए । हल्ला बालुवाटारबाटै फैलाइएको भन्दै उनीहरूले राष्ट्रपतिको संस्थालाई आफूहरूले विवादमा नपार्नेसमेत बताएका थिए ।
‘अहिले ठूलो षड्यन्त्र भइरहेको छ । राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाउने र मलाई दुवै पदबाट हटाउने तयारी भएको छ । तपाईहरु कसको पक्षमा हुने ? कि प्रधानमन्त्रीको विपक्षमा जाने ? तपाईहरुलाई यही सूचना भयो । आफ्नो पोजिसन छिट्टै क्लियर गर्नुस् । तर, म तर अन्तिमसम्म यसको सामना गर्छु’प्रधानमन्त्रीले शनिबार मन्त्रीहरुसँग भनेका थिए ।
प्रधानमन्त्रीको भनाईमा कृषि मन्त्री घनश्याम भुसाल र उर्जा मन्त्री बर्षमान पुनले आपत्ति जनाएका थिए । उर्जामन्त्री पुनले यस्ता कुरा पार्टी बैठकमै गर्नुपर्ने भन्दै शंकाका भरमा षड्यन्त्र भयो भन्दै हिँड्न नहुने बताएका थिए । मन्त्री भुसालले शीर्ष नेताहरू अनावश्यक हल्लाको बहकाउमा लागेको उदाहरण आफूसँग धेरै भएको भन्दै सूचनाको दुरुपयोग भएको कुरा बुझ्न प्रधानमन्त्रीसँग आग्रह गरेका थिए ।
आइतबार केहीबेर महाअभियोगकै मुद्दामा दुई अध्यक्ष ओली र दाहालबीच सवालजवाफपछि थप संवाद सोमबार गर्ने सहमति बनेको थियो । त्यसका लागि गृहकार्य गर्न महासचिव विष्णु पौडेल, बर्षमान पुन, शंकर पोखरेल र जनार्दन शर्मालाई जिम्मेवारी दिइएको छ । चार नेताको गृहकार्यपछि सोमबार ओली–दाहालबीच संवाद गर्ने र त्यसपछि मात्रै स्थायी कमिटी बैठक बस्ने नेताहरुको तयारी छ । आइतबार दाहाल र ओलीसँगै पौडेल, पुन, पोखरेल र शर्मा पनि बालुवाटार छलफलमा उपस्थित थिए ।
नेकपाको स्थायी कमिटी बैठक सोमबारका लागि बोलाइएको छ । उक्त बैठकअघि दुवै अध्यक्षबीच निर्णायक छलफल हुने बताइएको छ । नेकपामा दाहाल–नेपाल समूह प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष दुवै पदबाट ओलीले राजीनामा गर्नुपर्ने अडानमा छ । ओलीले अन्तिमसम्म लड्ने तर राजीनामा नदिने जवाफ दिएका छन् । यही विवादले असार १० बाट बसेको स्थायी कमिटी बैठक पटक–पटक स्थगित भएको छ । दुवैपक्ष भावी कदमबारे विमर्शमा जुटेका छन् ।
यसैबीच पार्टीको स्थायी कमिटी बैठकमा वरिष्ठ नेताहरुले नै राजीनामा मागेको भोलिपल्ट प्रधानमन्त्री एवं सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई सुटुक्क भेटे ।
असार १७ गते राति भएको त्यो गोप्य भेटको तरंग कम भएको थिएन, प्रधानमन्त्री ओलीको दूतका रुपमा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ आइतबार देउवा निवास बूढानीलकण्ठ पुगे । यो भेटपछि ‘सत्ता सहकार्यमा ओलीले मागे देउवाको सहयोग’, ‘कांग्रेसलाई गृहसहित अर्थ मन्त्रालयको प्रस्ताव’ जस्ता शीर्षकमा समाचारहरु छाउन थालेका छन् ।
साँच्चै ओलीले देउवासँग सत्ता सहकार्यको प्रस्ताव राखेका हुन् त ? कांग्रेस नेताहरुका अनुसार नेकपामा चलिरहेको ‘प्रोप्रोगाण्डा’को अर्को एउटा अध्याय मात्र हो । नेताहरुका अनुसार नेकपाको शक्ति संघर्षमा रहेका ओली र प्रचण्ड-माधव नेपाल दुबै समूहले कांग्रेसलाई आफू नजिक भएको सन्देश दिन खोज्नु स्वभाविक हो ।
किनकि भोलि साच्चिँकै नेकपामा फुट आएको अवस्थामा कांग्रेससँग मिलेर सरकार बनाउने चाँजोपाँचो मिलाएको सन्देश दिनसक्दा अर्को पक्षलाई दबाब पर्छ । त्यही उद्देश्यले ओलीले देउवालाई भेटेका थिए । उनले चाहेजस्तै प्रचण्ड-माधव नेपाल समूहमा देउवाले ओलीलाई साथ दिन खोजेकै हुन् त भन्ने त्रास कायम भएको देखिन्छ ।
स्रोतका अनुसार प्रचण्ड माधव समूहका एक नेताले कांग्रेसका एक नेतालाई बोलाएर ओली-देउवा भेटबारे सोधेका थिए । जतिबेला प्रचण्ड ओलीसँग भेटवार्ता गरिरहेका थिए, अर्का एक नेताले कांग्रेस नेतासँग कुराकानी गरिरहेका थिए । र, उनको मुख्य चासो ओलीले देउवासँग सहयोग मागे नमागेको थियो ।
केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा कांग्रेस सभापति देउवाले गरेको ब्रिफिङअनुसार आइतबार नेम्बाङसँग भएको भेटको चाँजोपाँचो डा. मिनेन्द्र रिजालमार्फत मिलाइएको थियो । त्यसैले भेटमा रिजाल पनि सहभागी थिए । नेम्वाङ १० बजेतिर देउवा निवास बुढानीलकण्ठ पुगेका थिए ।
कांग्रेस नेताहरुका अनुसार नेम्वाङको संकेत भने प्रचण्ड-माधव समूहसँग मिलेन कांग्रेसले प्रतितिधिसभाको विशेष अधिवेशन बोलाउने र प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन लागेको अशांकातिर थियो ।
त्यसैले एमसीसीबारे छलफल गर्न भनेर विशेष अधिवेशन बोलाउने र प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्ने ओली पक्षको आशंका थियो । भेटमा कांग्रेस सभापति देउवाले ‘कांग्रेस कसैको पक्ष विपक्षमा छैन, तपाईँहरुको कुरा चाँडै मिलाउनुस् है चाँडै’ भनेको उनी निकट स्रोतले बताएको छ ।
कुराकानीको सुरुमा नै देउवाले हतार-हतार संघीय संसद अधिवेशन अन्त्य गरेकोमा असन्तुष्टि जनाएका थिए । १७ गते भएको भेटमा प्रतिनिधिसभा बैठक बोलाएर एमसीसीलाई एजेण्डामा राख्न माग गरौं भन्ने र भोलिपल्ट हतारहतार संघीय संसदको धिवेशन अन्त्य गरेर आफूलाई ओलीले ढाँटेको उनले बताए । देउवाले यसो भनिरहँदा नेकपा संसदीय दलका उपनेता नेम्वाङ केही बोलेनन्, हाँसेर टारिदिए ।
नेम्वाङले भने संवैधानिक अंगहरुको नियुक्तिका विषयमा प्रधानमन्त्रीले तपाईलाई भेट्नुस् भनेकाले आएको बताए । जवाफमा देउवा केही पहिले अध्यादेश ल्याएर आफूलाई बाइपास गर्न खोजेको होइन भन्दै कडि्कएको स्रोतको दाबी छ । यद्यपि संवैधानिक परिषद्को बैठक बसेर जान सकिने उनले बताए ।
तर देउवा र नेम्वाङबीच भएको यो भेटलाई बाहिर भने सत्ता सहकार्यको प्रस्तावका रुपम प्रचार भएको छ । ‘प्रधानमन्त्रीले देउवालाई गृह र अर्थ मन्त्रालयको प्रस्ताव गरेको खबरहरू सार्वजनिक गरिएको छ । यसबारे प्रश्न गर्दा भेटमा सहभागी नेता मिनेन्द्र रिजाल भन्छन्, ‘पार्टीको आन्तरिक विवादमा एउटा पक्षले अर्को पक्षलाई दबाव दिन कांग्रेस आफूसँग नजिक भएको देखाउन यस्तो प्रचार गरेको हुन सक्छ ।’
प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेससँगको सम्बन्ध सुधार गर्ने प्रयत्न थालेका हुन् । पार्टीमा आन्तरिक शक्ति संघर्षका कारण संकटमा पर्न थालेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले कांग्रेससँग निकटता बढाएर जान चाहेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष दुवै पद नछाड्ने अडानमा रहेका र त्यसैका कारण पार्टी विभाजित हुने अवस्था बनेमा कांग्रेससँगको साझेदारीमा सरकार सञ्‍चालन गर्नेसम्मको बारेमा छलफल भएको स्रोतको दाबी छ । औपचारिक रुपमा भने कांग्रेसँग सरकारको साझेदारी र ओलीलाई काँध थाप्ने कुरा नभएको नेताहरु बताउँछन् ।